डचटाउन चलचित्र रात: स्पाइडरसमा • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन चलचित्र रात: स्पाइडरवर्समा
प्रकाशित अगस्ट 19th, 2020
फाइनलको लागि शनिबार, अगस्त २२ तारिख हामी मार्क्वेट पार्कमा सहभागी हुनुहोस् डचटाउन चलचित्र रात गर्मी को! यस पटक वरपर हामी देखाइनेछौं स्पाइडर म्यान: स्पाइडरियसमा २२ फिट inflatable ठूलो स्क्रीन मा! हामी बेलुका :22::7० सम्म खोल्नेछौं, र फिल्म अन्धकारमा सुरू हुन्छ।
यदि तपाईंले देख्नु भएको छैन भने माकुरा भित्र पहिले नै, तल ट्रेलर जाँच गर्नुहोस्:
हामी मार्क्वेट पार्क फिल्ड हाउसको अगाडि पहाडमा हुनेछौं। तपाईंको कुर्सी र कम्बलहरू ल्याउनुहोस्। तपाईलाई स्वागत छ तपाईका आफ्नै स्नैक्सहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर हामीसँग खाना ट्रकहरू हातमा रहेको क्षेत्रको अगाडिको तल्लो भागमा हुनेछ।
हाम्रो केही समुदाय संगठनहरूसँग भ्रमण गर्न अन्धकार भन्दा अलि अगाडि आउनुहोस्। मतदान गर्न दर्ता हुनुहोस्। खोज्नुहोस् ब्लाक आयोजन बारे जानकारी बाट DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन र डचटाउन सीआईडीसाथ साथ अर्बन लिगको ब्लक एकाइहरूको संघ. डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन तपाइँको टेक्सटाईल रिसाइक्लि program कार्यक्रमको बारेमा तपाइँलाई बताउन त्यहाँ हुनेछ।
हामी यो पनि सोध्छौं कि तपाईं मास्क लगाउनुहोस् र तपाईंको सीटबाट टाढा रहँदा सुरक्षित सामाजिक दूरी अभ्यास गर्नुहोस्। हामीसँग हात सेनिटाइजर र थप मास्कहरू उपलब्ध छन् यदि तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक छ भने।
डचटाउन चलचित्र रातहरू द्वारा प्रायोजित हो AB InBev, DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन, डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, जीन स्लेको केटीहरू र सेन्ट लुइसको केटाहरू क्लब, मानवता सेन्ट लुइसको लागि आवास, लुथरन विकास समूह, मूल क्रूसो भोजनालय, पादुआको सेन्ट एन्थोनी, थॉमस डन लर्निंग सेन्टर, र टावर ग्रोव छिमेकी समुदाय विकास निगम.
तल दायर गरिएको मार्क्वेट पार्क. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. DT2, डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, डचटाउन कार्यक्रमहरू, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, र मार्क्वेट पार्क. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अगस्ट 19th, 2020 .
DutchtownSTL.org मार्क्वेट पार्क डचटाउन चलचित्र रात: स्पाइडरवर्समा